Yenza ubugcisa obuninzi kunye neefoto zoqobo ngeFoto Focus | Ndisuka mac
Kule mihla sonke siphethe ikhamera epokothweni, yi-iPhone yethu (okanye nayiphi na enye i-smartphone), kwaye iifoto esilawulayo ukuthatha nazo ziya ziba ngcono kwaye zibengcono, ngakumbi ngale ndlela ikhethekileyo yemizobo esiyithandayo kakhulu ngayo. I-iPhone 7 Plus.
Nangona kunjalo, xa ukutyhala kuza kutyhala, Ukuba sifuna ukuba iifoto zethu zibe zintle ngokwenene, zahluke, ziyintsusa, zinomgangatho othile wobugcisa kunye nobungcali, kufuneka sisebenzise umhleli weefoto. Kwaye kubangcono ukuba ngumhleli onamandla, onemisebenzi enomtsalane, ekulula ukuyisebenzisa kunye nexabiso eliphantsi. Yiyo kanye Ukugxilwa kweefoto, isicelo onokufumana ngexabiso elihlekayo.
Iziphumo ezimangalisayo kunye nohlengahlengiso kwiifoto zakho ngokujolisa kwifoto
Sele singoLwesine kwaye, njengaye wonke uLwesine weveki nganye, namhlanje ndikuzisela umnikelo wesibini weveki abasinika wona ukusuka kumkhankaso we "Mac App Store Sales" kwaye, kwakhona, uyakuqhelana nalapho isithembiso sivela khona kuba imalunga Ukugxila kwifoto ukusuka kwi-Movavi, esineenkqubo zokuhlela imifanekiso esele siyigubungele Ndisuka mac ukuba ngowona mgangatho uphezulu.
Kule meko, Ukugxila kwifoto Isicelo esenzelwe ngokukodwa ukuba ukwazi zama ngobumfiliba bokuyila. Ngendlela elula kakhulu kwaye enomdla, uya kuba nakho ukugxila ekufotheni kwakho kwizinto eziyinyani; fiphaza imvelaphi kwaye uhambise isikhombisi ukugxila kumfanekiso kwizinto ezibaluleke kakhulu kuwe kwaye ke unike iifoto zakho uphawu olwahlukileyo, loqobo, ubuchule kunye nobugcisa obunobugcisa.
Ukongeza, unokulungelelanisa amanqanaba okufiphala, ukuqaqamba, umahluko, ubukhali, ukugcwala kunye nezinye iiparameter, kunye nokujikeleza umfanekiso, isityalo, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona kwaye ugcine nakweyiphi na yeefomathi ezaziwayo. Kwaye kwakhona ibandakanya Imowudi yeMacro eya kukuvumela ukuba ujolise kwizinto ezincinci.
Ukugxila kwifoto Inexabiso eliqhelekileyo elijikeleze i-euro elishumi elinesihlanu, nangona kunjalo ngoku ungayifumana ngqo kwiVenkile ye-Mac App nge- € 1,09 kuphela. Kodwa musa ukuthatha ixesha elide, ukunyusa kuya kusebenza kude kube ngomso, ngolwesiHlanu, nge-9 kaJuni ebusuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Yenza ubugcisa obuninzi kunye neefoto zoqobo ngokuGxila kwiFoto
Iibhanki ezintsha zijoyina uluhlu lwezinto ezihambelana neApple Pay